04/06/2018 - Page 4 sur 5 -
Famonoana ben’ny tanàna : Telolahy nadoboka am-ponja
Taorian’ny nanolorana ny raharaha teo anatrehan’ny fampanoavana ny sabotsy lasa teo, dia nadoboka am-ponja vonjimaika ao Mahajanga avy hatrany ireo telolahy isan’ny tompon’antoka tamin’ny famonoana ny ben’ny tanànan’Ankirihitra, distrikan’Ambato-Boeny. Mbola tsy tapitra hatreo kosa ny …Tohiny
Lehilahy namono ny vadiny : Hiakatra fampanoavana anio ny raharaha
Raha tsy misy ny fanemorana, dia anio no hiakatra fampanoavana ilay lehilahy nively ny loham-badiny tamin’ny maritoa tany Behenjy ny alarobia lasa teo. Notazonina tany amin’ny biraon’ny Zandarimaria tany an-toerana foana ity farany, izay efa …Tohiny
Fanohanana : Mpianatra 17 nahazo vatsim-pianarana mitentina 20 Tapitrisa Ariary
Ny fiainana no voalohan-karena. Ny fahatsapana izany no nahatonga ny Kaonsilan’i Monaco namolavola tetikasa hoentina hanampiana ireo mendrika. Mpianatra 17 avy amin’ny fianakaviana sahirana no nahazo vatsim-pianarana mitentina 20 Tapitrisa Ariary. Ny orinasa Star no …Tohiny
Tsy hisy ny taona fotsy amin’ity taom-pianarana ity, raha ny fanamafisana avy amin’ny minisiteran’ny Fanabezam-pirenena, omaly nandritry ny valandresaka natao teny amin’ny birao teny Anosy. Nampahafantatra ny besinimaro araka izany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena …Tohiny